सिमान्तले आफ्नो जन्मदिनमा किन गाए वियोगान्त गित ? – Rangapage
सिमान्तले आफ्नो जन्मदिनमा किन गाए वियोगान्त गित ?
June 18, 2017 June 18, 2017 rangapage0Comments
सिमान्त सन्तोषले जन्मदिनमा वियोगान्तक गीत लिएर आएका छन् । जन्मदिनमा रमाइलो गर्ने वेलामा उनले गर्ल फ्रेन्डले छोडेको पिडामा वियोगान्तक गीत लिएर आएका हुन् । विगत ३ वर्ष देखि थुप्रै गीत गाएर छोटो समयमै स्रोता–दर्शकको मन मष्तिकमा राजगर्न सफल सन्तोषले आखिर किन आफ्नो जन्मोत्सवमा वियोगान्तक गीत लिएर आए त ! के सिमान्तकी गर्ल फ्रेन्डले उनलाई छोडेकै हुन त ? भन्ने प्रश्नमा ‘अहिलेचाहीँ यो विषयमा केही नभनौ’ भन्ने सन्तोषको ‘छुटाइ गयौ किन कुन्नी, दुई मुटुको नातालाई…’ सार्वजनिक भएको छ ।
आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा गत बिहिबार युट्युव मार्फत सार्वजनिक गीतलाई ओमनाथ कडेरियाले लेखेका हुन् भने कम्पोज सन्तोषकै रहेको छ ।
पूर्वको छापाबाट गायन क्षेत्रमा होमिएका गायक सिमान्त सन्तोष स्टेज प्रर्फमेन्समा माहिर मान्निछन् । उनले स्टेजमा बिभिन्न राजनीतिज्ञहरुका साथै चर्चित कलाकारहरुको क्यारिकेचर पनि गर्ने गर्छन् । गीतमा आफैँ मोडलिङ गर्ने उनले ‘उचाई’ एल्वमबाट साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । सिमान्त छिट्टै नै ‘दुर्गाले मुर्गा बनाई…’ , ‘जहाँ छौ प्रिय तिमी…’ जस्ता गीत स्रोता–दर्शकमाझ ल्याउने तयारीमा छन् । आफ्नो पहिलो गीत ‘मेरो दिल दुखायौ के पायौँ…’बाट नै वाही वाही बटुलेर मन जित्न सफल भएका थिए सन्तोष ।
झापाको बनीयानी कचनकवल–६मा जन्मिएर हाल काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएका सन्तोषले छोटो समयमै नेपाली साङ्गीतिक वजारमा आफ्नो छुट्टै परिचय बनाएका छन् । नेपाल तथा भारतका बिभिन्न स्थानमा थुप्रै स्टेज प्रस्तुती दिएका उनका थुप्रै गीत मध्ये ‘तिमी पुजाकी थालि हौ…’, ‘हेरिदेउन छड्के छड्के…’, जस्ता गीत बढी रोजाईका गीत बनेका छन् । ‘कलाकारिता क्षेत्रमै रहेर देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा आएका हुँ, मान्छे जन्मेको मर्न र प्रकृतिको नियमित प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै हैन मानव भएपछि कुनै बिशिस्ट कार्य गर्न एउटा कुनै क्षेत्र चाहिन्छ त्यो क्षेत्र मैले कलाकारितालाई रोजे’ भन्छन् सन्तोष ।
← फिल्ममा आउनु भन्दा पहिला यस्ती थिईन साम्राज्ञी Samragyee RL Shah Childhood photos
मिस नेपाल २०१७ →
July 30, 2018 rangapage 0
“मिस एण्ड मिसेस फेमिना ईन्टरनेशनल”को ग्राण्ड फिनाले असार २ गते आर्मी अफिसर्स क्लबमा हुदै
June 14, 2018 rangapage 0
चर्चित गायक सिताराम पोखरेलको सुमुधुर आवाजमा रहेको “स्वार्थ तिम्रो “गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
April 24, 2018 rangapage 0